KENYA-Dowladda Kiinya Oo-Joojisay Dhismaha Safaaraddeeda-Somalia Iyo Sababta!!…Warbixin… | Allkisima.com
KENYA-Dowladda Kiinya Oo-Joojisay Dhismaha Safaaraddeeda-Somalia Iyo Sababta!!…Warbixin…
Muqdisho:-(Allkisima)-Dowladda Kiinya ayaa Shaacisay in ay Guud ahaan ay hakisay mashruuc lagu dhisaayay safaaradeeda ay ku leedahay Magaalada Muqdisho , waxaana ay sabab uga dhigtay amni darro darteed.
Haweenayda Wasiirka arrimaha dibadda ka ah Kiinya oo Khudbad ka horjeedisay Baarlamaanka Kiinya ayaa ku dhawaaqday in dhismaha Safaarada la billaabay August 2015-kii qorshuhuna ahaa in la soo gaba gabeeyo December 2016 sidaas darteedna loo hakiyay Amnidarada ka jirta Caasimadda Muqdisho.
Mrs-Aamina Maxamed Wasiirka arimaha dibadda Kiinya ayaa sidoo kale xustay in shaqaalaha dowladda Kiinya ee ku sugan muqdisho loo baqaayo amnigooda.
Waxa ay xustay Aamina in 35% dhismaha Safaaradda la dhameeyay waxaana ay sheegtay in dhaqaalaha ku baxaya in uu aad u badan yahay.
Ugu dambeyntiina Sanaddii 2014 tii ayay ku dhawaaqday dowladda Kiinya in ay dib u fureyso safaaraddeeda SOMALIA.